3 siyaabood si ay u xaliyaan shilalka windows media player
Windows Media Player waa arrin caan ah oo ka mid ah dadka ka soo adduunka oo dhan. Laakiin iyadoo aan loo eegayn sida caanka ah software tani ay tahay; Windows Media Player ma aha oo gebi ahaanba bilaash ah cayayaanka. Xaaladaha Dhowr ayaa la soo sheegay ilaa taariikhda ku saabsan shilalka la rabin ee ciyaaryahankaan music aadka loo jecel yahay. Waa in aanu si ay u sahamiyaan kiis la mid ah halkan:
Qeybta 1: Windows Media Player bidbidayaan yaabo inay kula kulmaan
Qeybta 2: Sidee si ay u xaliyaan dhibaatada?
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u furo Windows Media Player inuu u ciyaaro aad audio / video files, waxaa isla markiiba la bidbidayaan fariin qalad ah "Windows Media Player ayaa joojiyay ka shaqeeya." Markii hore waxaan u maleeyay in dhibaatadu ay tahay ku meel gaar ah iyo ciyaaryahan wanaagsan ka shaqeyn doonaan haddii aan furo ka iyo meelaha kale. Laakiin iyadoo aan loo eegayn siday ugu adag isku daynay, Media Windows ka Player kaliya oo aan ka jawaabi lahaa.
Fariin qalad Tani waxa loo arkay on Windows 7, laakiin ka dib markii qaar ka mid ah sahaminta waxaan ogaaday in farriintan khaladan u muuqan kara ku dhowaad nidaamka ka hawlgala Windows kasta oo ay ka mid yihiin Vista, XP iyo 8. version of Media Windows ka Player sidoo kale mas'uul ka ahaa ma aha sida dhibaatadan waxaa laga helay versions 11, 12 iyo kuwo kale oo badan.
More info iyo sababta keentay shilka dhacay,
Haddii aad isku daydo in ay baadhaan log codsigaaga ku Xunyahay, waxaad si deg deg ah u heli doonaan in ay dhibaatada sii socoto furaha lagu magacaabo Indiv01_64.key. Muhiimka ah Taasi waxay u dhigantaa in maamulka xuquuqda digital iyo haddii kayd ah waa musuqmaasuq, marnaba awoodin inay ku shuban Media Windows ka Player aad u noqon doonaa. The khasnado maamulka xuquuqda digital noqon kartaa musuqmaasuq ay sabab u tahay dhowr sababood oo kale beddelo of hardware.
Haddii aad ku fikirayso in dib u rakibidda-ciyaaryahan warbaahinta xallin doonaan arrinta, ka dibna Waad qaldan tihiin oo gabi ahaanba qalad ah aan la xiriira ciyaaryahan warbaahinta. Xalka kaliya ee dhibaatadan waa dib u dhiska DRM ah (maamulka xuquuqda digital) khasnado. Marka aad kala cadeeyo khasnado this, khasnado waxaa si toos ah abuureen socda bilowdo laakiin dhibaatada baxdo sababtoo ah aad leedahay si ay dib-u-helid shatiyada ah. Haddii aad nasiib u leedahay in gurmad ah ee liisanka aad ee ciyaaryahan warbaahinta, si fudud iyaga ma doonan karo iyo mar labaad ayaan dhisi aad khasnado DRM. Si kastaba ha ahaatee aad haddii aadan in nasiib, waxaad u baahan doontaa in ay dhex maraan talaabooyinka soo socda:
Tallaabada 1 U fiirso khasnado DRM ah. Buugga waxaa inta badan iska Qarsoona users ah. Si aad u hesho file DRM khasnado ah, furo c wadid aad programData Microsoft Windows DRM khasnado.
Tallaabada 2 Marka aad furto khasnado DRM ah, waxaad ka heli doontaa dhawr faylasha waxa ku jira. Waxaad sidoo kale abuuri karaan gurmad ah u files ama iyaga tirtirto. Dhig ee liisanka cusub ee file this.
Tallaabada 3 bilow windows media player mar kale oo aad samaysay.
3 siyaabood si ay u xaliyaan shilalka media player
Waxaa jiri kara qaar ka mid ah sababaha ka danbeeya shilalka Windows Media Player. Waxaa lagama maarmaan ah in aad si loo ogaado sababta dhabta ah ka dambeeya shilalka, maxaa yeelay markaas oo kaliya in aad awood u yeelan doonaan in ay helaan xal u yeelay. Kiiska ayaa ku xusan waxaa la xiriira Baadi khasnado DRM ah. Si kastaba ha ahaatee waxaa jiri kara sababo kale oo dhowr ah oo ka dambeeya shilalka aad. Waa inaad si dhow u falanqeeyaan qalad ah in log Codsiga ka hor gudbaan xal u ah shil ka heli.
Qaar ka mid ah sababaha ka dambeeya Windows Media Player shil ka mid ah:
1. Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah dhibaato la aasaasida ciyaaryahanka ka.
2. Arrinta ayaa sidoo kale lala xiriirin karaa shabakadda goobaha hoorto oo ka Celiya laga yaabaa in audio / video geeyo.
3. maktabadda ciyaaryahan ayaa la khilaafo laga yaabaa.
Kuwaas waxaa ka dambeeya Windows Media Player shil sababaha ku dhici karaa version kasta.
Halkan waxaa ku qoran liiska 3 siyaabood ee sahlan oo dhakhso aad kaas oo lagu cusboonaysiiyo kartaa Windows Media Player si dhakhso ah:
Xalka 1: Windows troubleshooter hidi-
Tani waa mid ka mid ah hababka ugu fudud oo lagu xalliyo dhibaatada shilalka warbaahinta Windows Player. Raac tallaabooyinkan si aad u dalbato xal this:
1: fur guddi gacanta aad.
2: Riix "View All" button uu furmo suuqa muuqday.
3: Waxaad ka heli doontaa jabkii dhabta dhibaato u Windows Media Player Library iyo Settings ah.
4: Riix troubleshooter si aad u ordo. Waxaad ugu dhakhsaha badan noqon doonaa dhamaadka saaxir ah oo leh "Ka codso ka dhalato" sida ikhtiyaarka final.
5: Riix "Ka codso ka dhalato" badhanka inay isbedel ku haboon in nidaamka qalliinka iyo sidoo kale Media Windows ka Player.
6: reboot habka daaqadaha ka hawlgala oo inta badan u badan tahay in aad Windows Media Player joojin doonaa hartay.
Xalka 2: U beddelaan qaab faylka
Waxaa laga yaabaa in ay dhacdo in aad Windows Media Player ma awoodo inuu ciyaaro nooc gaar ah oo file maqal ah / video. Tani waa meesha converters file ka soo galay ciyaarta. The Wondershare Video Converter Ultimate waa mid ka mid Converter file sida in mushkiladda xal u ah shilalka Windows Media Player by diinta nooca file. Waxaad si fudud u beddeli karaan nooca faylka raacaya tallaabooyinka soo socda:
1. Dooro faylka aad rabto in aad si loogu badalo ka dibna mid ka mid jiidi n hoos u Wondershare video Converter Ultimate ama kaliya dhirtuba in faylka.
2. Mid ka mid ah dhankiisii ​​midig iyo interface ka, doortaan nooca file wax soo saarka. Waxaad dooran kartaa dhawr kordhin file sida avi, mp4 iwm
3. Marka aad hubto oo ku saabsan iyo wixii soo baxayey, guji badhanka diinta ee hoose ee shaashadda.
Xalka 3: SFC uu baaritaanku u baadhi qaladaadkii
Haddii aad Windows Media Player waa mar kale iyo mar kale wateen ka dibna waxaa suuro gal weyn ee files kharribmay oo aad nidaamka. Si aad u hesho iyo hagaajin, kuwaas oo files kharribeen, iskaanka SFC soo gala play! Inta lagu guda jiro habka iskaanka, dhammaan faylasha ilaaliyo nidaamka waxaa la marsiiyey baadida kasta. Waxaad u soo raaci kartaa talaabooyin lagu xalinayo media player wateen uu arrinta la iskaanka SFC:
1. Fur degdeg ah amarka ku saabsan nidaamka ka hawlgala Windows.
2. Nooca amarka soo socda 'SFC / scannow' in xigashooyin iyo guji galaan.
3. Marka aad riixdo galaan, iskaanka ay bilaabi doonaan iyo waxa ay sidoo kale waxaad weydiisan kartaa DVD rakibo.
Marka aad doorato iskaanka SFC, waxaa laga yaabaa in ay tirtirto qaar ka mid ah files kharribeen sidoo kale. Si kastaba ha ahaatee Windows Media Player shaqeeyaan doonaa si habsami leh.
3 Wax ku saabsan daaqadaha media player 2015
3 talooyin ku saabsan Windows Media Player 64 yara
2 siyaabaha aad ku ciyaari flv windows media player
> Resource > WMP > 3 siyaabood si ay u xaliyaan shilalka windows media player